Otú ndozi a ike mbanye mgbe njehie etịbe
Olee otú ịrụ a ike mbanye diagnostic
Ike mbanye bụ ihe kasị ịdabere unit nke ọ bụla na kọmputa usoro. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị arụ ruo akara mgbe ahụ, ọ bụ nnọọ ike na-usoro iji. Isi òkè nke ọ bụla na kọmputa usoro ntụgharị OS bi n'elu ike mbanye na maka otu ihe ahụ ọ dị ezigbo mkpa iburu n'obi na draịvụ ike ike dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na onye ọrụ na-eche na ndị ike mbanye na-adịghị arụ ọrụ nke ọma mgbe ahụ, ọ dị ezigbo mkpa iburu n'obi na draịvụ ike nchọpụta nsogbu ga-rụrụ. E nwere ọtụtụ ụzọ nke na-eme otú ahụ ma na ihe ndị kasị mkpa ndị e depụtara n'okpuru ebe.
Ego Disk atụmatụ
Ọ na-a wuru na ọrụ nke os ma na enwere na-enyere ndị ọrụ ebe ọ bụ na inception. The ụzọ a ga-agbaso bụ Malite> nri pịa na mbanye a ga-scanned> Properties> Ngwaọrụ> ego Ugbu a. Ọ ga-ewepụ ọ bụla mbipụta na draịvụ ike a họọrọ. Bad sectors, cross jikọrọ faịlụ, furu efu ụyọkọ na ndekọ metụtara mbipụta ga-egbo na zuru.
Manufacturers nke kasị nke oge a ike draịva na-ahụ na onwe mmejuputa atumatu usoro bụ n'ebe iji jide n'aka na ihe iseokwu nke ike mbanye na-abụghị nanị kọrọ kamakwa kpebiri. Ọ na-amara ka smart enyocha kwa na ndị a na-rụrụ site disk onwe ya ikwe ka ọrụ iji nyochaa akụkọ na nsogbu ike draịva-ezute. Ọ na-emekwa n'aka na nfiksi na-atụ aro nke a kpọmkwem nke.
Nke atọ ọzọ omume
E nwere ọtụtụ iri puku diagnostic software omume nke na-eme ka n'aka na draịvụ ike njehie na-achọpụtara na kpebiri ozugbo usoro ihe omume na-agba ọsọ. Ndị a bụ ma freeware na akwụ ụgwọ utilities iji nyere ndị ọrụ na nke a iji jide n'aka na ihe kasị mma na-eme ka ha ike draịva otú ha ga-esi n'ime ihe iseokwu ASAP.
Common njehie Koodu n'oge ike mbanye diagnostic
esonụ bụ ndepụta nke ihe ndị kasị nkịtị njehie Koodu na onye encounters na-agba ọsọ a ike mbanye diagnostic. Ndepụta nwere nnukwu data ma naanị ndị Koodu e kwuru ebe a na-gbapụta ugboro ugboro iwe ọrụ.
Error Usoro 0142
Nke a njehie ozugbo pụtara na draịvụ ike arahụ ọjọọ na-achọ ihe ozugbo ndochi. The SATA ma ọ bụ ide USB nnọchi na nke a nwere ike na-arụ ọrụ ụfọdụ ndị ọrụ ma ọ bụ naanị a ụzọ gburugburu bụghị a kwesịrị ekwesị ngwọta. Zuru njehie koodu nke na-egosi bụ "Draịvụ (d) - S / N (s), onwe ule kụrụ afọ n'ala. Ọnọdụ = (x) "
Error Usoro 0145
The njehie koodu pụtara na onwe ule emeghị mezue ruru timeout. Isi ihe na ihe mere nke a nke bụ mgbe onye ọrụ na-agba mbọ na-agba ọsọ na emeputa diagnostic ule na iji SSD mgbe ọ bụ ọdabara ide / SATA. Otú ọ dị na ebutekarị bụ SSD ike mbanye ọdịda. The yiri njehie koodu bụ "Ike Drive (aha) - Self Ule mere bụghị zuru ezu."
Error Usoro 43
Nke a njehie-emetụta windows 7, nkesa 2008, 2012 na vista. The yiri njehie na nkọwa na-egosi bụ "Windows kwụsịrị ngwaọrụ a n'ihi na ọ ka kọrọ nsogbu. (Usoro 43). "The ngwaọrụ ọkwọ ụgbọala notifies windo na ụfọdụ ngwaọrụ nke na nke a bụ ike mbanye nke na-emezughị na-arụ ọrụ na ya nwekwara ike mere ruru ngwaọrụ ọkwọ ụgbọala ọdịda.
Error Usoro 7
E nwere atọ isi na-akpata nke doro njehie ie BIOS bụghị iji,-ezighị Ram, Registry mbipụta. Njehie nkọwa na-agụ dị ka "The faịlụ I386 \_ Ntkrnlmp.exe-apụghị kwajuru. Njehie koodu bụ 7. "E nwere ọnụ ọgụgụ nke onwe diagnostic ngwaọrụ na dị online iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri. Onye dị na http://errortools.com/windows/how-to-fix-error-code-7/ nwere ike ịbụ nke akwa aka maka ọrụ na nke a.
Fixing njehie Usoro 0142
Dị ka ike mbanye bụ ga-anọchi na nke a otú ahụ zuru ezu usoro bụ ka ndị a:
Ozugbo data a zoputara eji ihe ọ bụla ịba uru a ọhụrụ ike mbanye bụ zụrụ:
Kọmputa mkpuchi bụ-emeghere gaba n'ihu:
Ozugbo ike mbanye ikpe na-emi odude kposara bụ na-ewepụ:
The ike mbanye bụ kewapụrụ n'ime cover mgbe ijikọ ọdụ ụgbọ mmiri na-edozi ihe iseokwu ahụ ma mezue usoro na zuru:
Fixing njehie Usoro 0145
Upgrading ngwaike nwere ike ime ka o kwe omume maka ọrụ nke ma windows na Mac OS iji dozie nsogbu ahụ. Nzọụkwụ bụ:
The mmalite ihe na-na--nyochaa dị ka a nzọụkwụ mbụ nke usoro:
Na nzọụkwụ nke abụọ na draịvụ ike bụ na-kpochara:
The omume na-eke ndị mbipụta kwesịrị-nyochaa n'ihu na usoro:
Ozugbo ọ e mere os bụ na-reinstalled wepụ njehie koodu 0145
Fixing njehie Usoro 43
Ndị na-esonụ na-aka na nke a:
Onye ọrụ kwesịrị ka pịnye sysdm.cpl mgbe iso ụzọ Malite> Gbaa mere na chọrọ interface-egosi:
Onye ọrụ ahụ kwesịrị pịa ngwaike tab> njikwa ngwaọrụ:
The disk mbanye bụ na-nri pịrị iji jide n'aka na uninstall nhọrọ a pịrị na ọhụrụ ọkwọ ụgbọala na mgbe ahụ ka-ibudatara na emeputa website iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri.
Fixing njehie Usoro 7
Ọ na-mere ruru Ram ọrịa kacha nke oge. Ndị na-esonụ bụ a ngwa ngwa nfiksi na nke a nke na-akwado a n'aka mkpebi:
The Ram ụdị bụ na-enyocha dị ka a nzọụkwụ mbụ nke usoro:
Ozugbo zuo e mewo ka kọmputa mkpuchi bụ a ga-emeghe:
N'ime Ram anya ochie na otu onye bụ na-ewepụ na ọhụrụ na otu onye bụ na-arụnyere mezue usoro:
Ngwá ọrụ iji weghachi data si ike mbanye bụrụ na ọ bụla njehie mere data ọnwụ
The Wondershare data mgbake omume bụ onye nke kasị mma utilities na-dị na ahịa iji jide n'aka na nke nke data mgbake bụ dịghị egwuregwu mgbe niile. Ọ na-eme n'aka na ọrụ niile tech etoju nwere ike iji ihe omume na-akwa ala na afọ ojuju na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na ihe omume na-akwado abụọ interfaces ntụgharị ọkachamara ịba uru na elu mmekọ na-mara dị ka ọkọlọtọ mode. The interface na arụmọrụ nke omume na-egwu na onye ọrụ mgbe chọtara ya ike na-arụ ọrụ nke usoro ihe omume dị ka ọ na-eme enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
5 Easy Ụzọ ịrụzi diski ike gị niile site na Onwe Gị
Olee otú Naghachi Draịvụ Paswọdu na Data si Draịvụ
Olee otú naghachi faịlụ site Dell Ike diski
> Resource> Draịvụ> otú ndozi a ike mbanye mgbe njehie etịbe